Pogba oo qishkii ugu weynaa bixiyey waxa uu cadeeyey inuu ka tagayo Juventus.. Kooxdee ayuuse ku jeedaa? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Pogba oo qishkii ugu weynaa bixiyey waxa uu cadeeyey inuu ka tagayo Juventus.. Kooxdee ayuuse ku jeedaa?
Pogba oo qishkii ugu weynaa bixiyey waxa uu cadeeyey inuu ka tagayo Juventus.. Kooxdee ayuuse ku jeedaa?
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 4-07-16 1:20 PM Macalinka Man United Jose Mourinho ayaa huba in kooxdiisa ay ku guuleysan karto saxiixa xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Juventus Paul Pogba.
Xidigan u dhashay dalka France ayaa si xur ah ugu biiray kooxda Juventus kadib markii beeca xurta ah kaga dhaqaaqay kooxda Man United.
Tan iyo markii uu ka hayaamay kooxda ka dhisan Old Trafford waxa uu noqday ciyaaryahan Pogba mid kamid ah ciyaaryahanada fara ku tiraska ah ee caalamka ugu fiican, waxa ayna United dooneysaa iney u jebiso rikoorka u yaalay suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada.
Mourinho ayaa u sheegay saaxiibkiisa in Man United ay ku dhawdahay iney 80 Milyan oo ginni kusoo qaadato xagaagan Paul Pogba, waxa uuna sidoo kale ka dhawaajiyey in Pogba xoojin doono kooxdiisa.
Ugu dambeyn Paul Pogba ayaa bixiyey qishkii ugu sareeyey ee cadeynayo inuu isaga hayaamayo kooxdiisa Juventus xagaagan xilli uu xidigan ku shaaciyey Boggiisa Twitter hadal cadeynayo inuu ka socda horyaalka Serie A da dalka Talyaaniga.